ဘုတလင်မြို့နယ်တွင် စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်း မိုင်းဆွဲခံရ
DVB - Lun, 16/05/2022 - 1:00pm
စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ဘုတလင်မြို့နယ်၊ သားဖန်းရွာကနေ ပြန်လာတဲ့ စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်း မေ ၁၆ ရက်နေ့မှာ မနက် ၁၀ နာရီခွဲလောက် မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။
ဘုတလင်မြို့ရဲ့ရှေ့ဘက်မှာ မိုင်းဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဒေသခံ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦး ကျဆုံးခဲ့တယ်လို့ ဘုတလင်တောကျီးကန်းအဖွဲ့ တာဝန်ရှိသူတဦးက ဒီဗွီဘီကို ပြောပါတယ်။
“ကျနော်တို့ သားဖန်းရွာကနေ ဘုတလင်မြို့ဘက်ပြန်လာတဲ့စစ်ကြောင်းကို လမ်းတဝက်ကနေ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။ မိုင်းကွင်းထဲကို တန်းတန်းမတ်မတ်ဝင်လာတဲ့အချိန်ကို ဆွဲနိုင်ခဲ့တယ်ဗျ။ အထိခိုက်ကတော့များမယ်။ အတိကျတော့ မပြောနိုင်ဘူးဗျ။ ကျနော်တို့ဘက်ကတော့ လက်နက်ကြီးကျည်ထိမှန်ပြီး တဦးကျဆုံးခဲ့တယ်။ အဖွဲ့ကတော့ ကြေးမှုံအဖွဲ့က ရဲဘော်တယောက်ပါ။”
အခုစစ်ကြောင်းကို ဒေသခံ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေက အရပ်လေးမျက်နှာကနေ ဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး တောကျီးကန်းအဖွဲ့၊ ရမ်းဘီလူးမုတ်ဆိတ်အဖွဲ့၊ ပျံလွှားအဖွဲ့နဲ့ ကြေးမှုံအဖွဲ့တို့က မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ သိရပါတယ်။
ရေလယ်ကျွန်းဒေသ၌ ၁၀ ရက်အတွင်း စစ်ကောင်စီတပ် မီးရှို့မှုကြောင့် ​အိမ်ခြေ ၁၅၀ နီးပါး ဆုံးရှုံး
DVB - Lun, 16/05/2022 - 12:44pm
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ရေစကြိုမြိုနယ် ရေလယ်ကျွန်းဒေသက ကျေးရွာတွေကို မေ ၇ ရက်ကနေ ၁၆ ရက်အထိ ၁၀ ရက်အတွင်း စစ်ကောင်စီတပ်တွေ မီးရှို့ဖျက်ဆီးတာကြောင့် ပြည်သူတွေရဲ့ နေအိမ် ၁၅၀ လောက် ဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ ရေစကြို PDF နဲ့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။
ရေလယ်ကျွန်းဒေသ သတင်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံက “မနေ့ညက မိုးကွဲရွာမှာ စခန်းချပြီးတော့ ဒီကနေ့ မနက်မှာ မိုးကွဲရွာကို မီးရှို့ထားခဲ့တယ်။ အဲဒီကနေပြီးတော့ တောင်ကုန်းရွာ ကံဦးရွာကို လည်း တရပ်စပ်မီးရှို့သွားတယ်ဗျ။ သွားတုန်းက မီးရှို့သွားတဲ့ မဲကုန်းရွာကိုလည်း ထပ်မီးရှို့တယ်ဗျ၊ အိမ်အားလုံးပေါင်းရွာ ၂၀ နီးပါးလောက် မီးရှို့ခံရတယ်ဗျ” လို့ ပြောပါတယ်။
ကံဦးကျေးရွာ ဒေသခံပြည်သူတယောက်က “စစ်ကောင်စီတပ်တွေ စစ်ကြောင်းစထိုးတဲ့ နေ့ကတည်းက ကျနေတို့ ရွာသူရွာသားတွေ အသက်လုပြီး ဘေးလွတ်ရာကို ထွက်ပြေးနေကြရတာဗျ။ ဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာလည်း စစ်(…) တွေက ကျနော်တို့ရွာကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးလို့ အိမ်ခြေ ၃၀ လောက်မီးထဲပါသွားပြီ။ အိမ်နဲ့ မနေဖူးတဲ့ကောင်တွေ ဆိုတော့ အိမ်တအိမ်ရဲ့ တန်ဖိုးကို ဘယ်နားလည်မလဲ။ ပြည်သူတွေမှာတော့ မျက်ရည်နဲ့ မျက်ခွက် ခံစားကြရတာ။ ကျနော်တို့ ပြည်သူတွေရဲ့ အပူမီးတွေဟာ သူတို့အတွက် ကောင်းကောင်း ဝဋ်လည်ကြမှာပါ” လို့ ပြောပါတယ်။
စစ်ကောင်စီတပ်ဟာ ရေလယ်ကျွန်းဒေသအတွင်း မိုင်းခွဲခံရတာ၊ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာတွေ မရှိတဲ့ အနေအထားမှာပင် လူနေအိမ်တွေကို လိုက်လံဖျက်ဆီးမီးရှို့နေတာလို့ ဒေသခံတဦးက ပြောပါတယ်။
“ရေလယ်ကျွန်းဒေသက စစ်ကောင်စီရဲ့ နယ်မြေစိုးမိုးမှု အားနည်းတာကြောင့်လို့ ထင်တယ်။ သူတို့က မိုင်းခွဲလို့ မီးရှို့တာ တိုက်ပွဲဖြစ်လို့ မီးရှို့တာမျိုး မဟုတ်ဘူး။ ဒီအတိုင်း ဘာမှမဖြစ်ပဲ မရှိဘဲနဲ့ကို အိမ်တွေ လိုက်မီးရှို့နေတာ။ ပြီးတော့ကျနော်တို့ ရေလယ်ကျွန်းဒေသကလည်း စစ်ကောင်စီကို အပြည့်အဝဆန့်ကျင်တဲ့ဒေသဖြစ်တာကြောင့်လည်း အဲဒီလို လုပ်နေတာ ထင်တယ်။”
စစ်ကိုင်းတိုင်းဘက်ကနေ စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာ ရေလယ်ကျွန်းဒေသကို စစ်ကြောင်း ၃ ကြောင်း နဲ့ဝင်လာပြီး မီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတာလို့ ရေစကြို PDF တပ်ရင်း ၂ ရဲ့ တပ်ရင်းမှူး ဗိုလ် မှိုင်းတေဇက ဒီဗွီဘီကို ပြောပါတယ်။
“စစ်(…)တွေ ရွာတရွာကို ဝင်မွှေပြီဆိုတာနဲ့ ပြည်သူတွေနဲ့ စစ်(…) တွေကြားထဲမှာ ကျနော်တို့ အမြဲတမ်းရှိတယ်ဗျ။ တိုက်လို့ရရင်လည်းတိုက်တယ်၊ တိုက်လို့မရရင်လည်း ဒီအတိုင်းစောင့်ကြည့်နေပြီးတော့ သူတို့တွေ ရွာကိုသောင်းကျန်းပြီး ပြန်ထွက်သွားတာနဲ့ လုံခြုံရေးအပြည့်နဲ့ နယ်မြေရှင်းလင်းပေးရတယ်။ ရွာကို မီးရှို့သွားရင်လည်း ပြည်သူတွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး မီးငြိမ်းသတ်ပေးရတယ်။”
ကောက်ယူရရှိတဲ့စာရင်းတွေအရ စစ်ကောင်စီတပ်က ၁၀ ရက်အတွင်း မဲကုန်းနဲ့ကံဦးရွာက အိမ် ၂၀၊ မိုးကွဲရွာက ၁၇ အိမ်၊ လှေခုတ်ရွာက ၁၈ အိမ်၊ မိဖုရားနဲ့မြေစွန်းရွာက ၁၁ အိမ်၊ အိမ်တောင်ကုန်းရွာက ၉ အိမ်၊ ဆည်သည့်ရွာက ၈ အိမ်၊ ငတရော်ရွာက ၇ အိမ်၊ ရွှေလှံရွာက ၃ အိမ်၊ ဖြုံဘူးရွာက ၂ အိမ်နဲ့ သာဂေါင်၊ သောင်ရှေ့၊ မင်းရွာနဲ့ဘိုကုန်းတို့မှာ ၁ အိမ်စီ မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရ ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကတော့ ကျေးရွာတွေကို မီးရှို့ ဖျက်ဆီးတာဟာ သူတို့ရဲ့ လက်ချက်မဟုတ်ဘူးလို့ အမြဲတမ်းငြင်းဆန်လေ့ရှိသလို PDF တပ်ဖွဲ့တွေကသာ မီးရှို့ ဖျက်ဆီးနေတာလို့ စွပ်စွဲ ပြောဆိုလေ့ရှိပါတယ်။
မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှာ စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်နေ့ကနေ အခုနှစ် ဧပြီ ၃၀ ရက်အထိ စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေ မီးရှို့ဖျက်ဆီးလို့ အိမ်ခြေ ၂၁၃၁ လုံး မီးလောင် ဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို Data For Myanmar က မေ ၁ ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
ရေလယ်ကျွန်းဒေသမှာ စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေ နေ့စဉ်လိုလို တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့် ဒေသခံတွေ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်။
လက်ရှိမှာ စစ်ဘေးမီးဘေး‌ရှောင် ပြည်သူတွေဟာ နီးစပ်ရာဆွေမျိုးတွေ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာ မှီခိုနေထိုင်နေရပြီး တချို့သူတွေမှာ နီးစပ်ရာဆွေမျိုး မရှိတာကြောင့် ရပ်ဝေးမှာ ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်နေကြရပြီး စားဝတ်နေရေးအတွက် နီးစပ်ရာကျေးရွာများက ဝိုင်းဝန်းထောက် ပံ့နေကြ ရတယ်လို့ ဒေသခံတွေဆီက သိရပါတယ်။
မြန်မာ့ရွှေစျေး ကျပ်သိန်း၂၀ အထက် ပြန်ရောက်
DVB - Lun, 16/05/2022 - 12:39pm
မြန်မာ့ရွှေဈေးဟာ မေလ ၁၆ ရက် ရန်ကုန်တိုင်း ရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း YGEA ရဲ့ အဖွင့်ဈေးအရ အကယ်ဒမီ မီးလင်းရွှေ တစ်ကျပ်သားဟာ ကျပ်သိန်း ၂,၀၄၂,၀၀၀ အထိ ပြန်လည်မြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ မေ ၁၃ ရက် သောကြာနေ့မှာ YGEA ရဲ့ အကယ်ဒမီမီးလင်းရွှေ အဖွင့်ဈေးက ကျပ် ၁၉,၄၆,၇၀၀ သာရှိခဲ့တာဖြစ်လို့ ၃ ရက်အတွင်း ကျပ် ၁ သိန်း၀န်းကျင် ပြန်လည်မြင့်တက်ခဲ့တာပါ။
ပြီးခဲ့တဲ့ မေလ ၄ ရက်နေ့က ပြုလုပ်တဲ့ ရွှေကုန်သည်တွေနဲ့ YGEA တို့ရဲ့ ဆွေးနွေးပွဲ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ရွှေဆိုင်တွေ၊ ရွှေကုန်သည်တွေက YGEA သတ်မှတ်တဲ့စျေးနှုန်းကို ၅၀၀၀ ကျပ် ပေါင်းထည့်ပြီး စျေးနှုန်းသတ်မှတ် အရောင်းအ၀ယ် ပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ လက်တွေ့ မြေပြင်စျေးကွက်မှာတော့ YGEA ရဲ့ အဲဒီသတ်မှတ်စျေးနဲ့ ဈေးကွက်အတွင်း ရောင်းချခြင်းမရှိဘူးလို့ ရွှေ၀ယ်ယူစုဆောင်းသူတွေထံက သိရပါတယ် ။
“ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဆို YGEA ရဲ့ သတ်မှတ်စျေးက တစ်ကျပ်သားကို ၁၉၄၆၀၀၀ လောက်ထိ ပြန်ကျသွားတယ်။ အဲဒီဈေးနဲ့ ဝယ်ချင်တဲ့သူတွေ များတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရွှေဆိုင်တွေက မရောင်းဘူး။ စျေးကို ဟန်ပြပဲ တင်ထားကြတာ။ အလျော့တွက်ပါတဲ့ ရွှေအချောထည်တွေပဲ ရောင်းတယ်” လို့ ရွှေဝယ်ယူစုဆောင်သူ တစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
သတ်မှတ်ထားတဲ့ ရည်ညွှန်းစျေးနဲ့သာ အသင်းရုံးအတွင်း အရောင်းအဝယ် ပြုလုပ်ခွင့်ရှိကြောင်း ဒီနေ့ မေ ၁၆ ရက်နေ့မှာ YGEAက ထပ်မံ အသိပေးချက် ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
အသင်းရုံးခန်းပြင်ပမှာ အရောင်းအဝယ် ပြုလုပ်ပါက အသင်းစည်းကမ်းနဲ့အညီ အရေးယူမယ်လို့ လည်း ထုတ်ပြန်ထားပါသေးတယ်။
ဒီနေ့မှာ YGEA ရဲ့ သတ်မှတ်စျေးနှုန်းက တစ်ကျပ်သားကို ကျပ် ၁ သိန်းဝန်းကျင်အထိ အတက်ကြမ်းခဲ့ပေမဲ့ ကမ္ဘာ့ရွှေစျေးကတော့ ကျဆင်းနေပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ မေ ၁၃ ရက်မှာ ကမ္ဘာ့ရွှေ ၁ ထရိုင်အောင်စကို ၁၈၂၆ ဒေါ်လာရှိခဲ့ပြီး၊ ဒီနေ့ မေ ၁၆ ရက်မှာ ၁ ထရိုင်အောင်စကို ၁၈၀၅ ဒေါ်လာကို ပြန်လည်ကျဆင်းခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။
DVB - Lun, 16/05/2022 - 12:37pm
Irrawaddy - Lun, 16/05/2022 - 12:33pm
The post Malaysian Foreign Minister Meets Counterpart From Myanmar’s Shadow Govt appeared first on The Irrawaddy.
ရေးမြို့နယ်တွင် စစ်ကောင်စီတပ်နှင့် KNLA တပ်တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်
DVB - Lun, 16/05/2022 - 12:23pm
မွန်ပြည်နယ် ရေးမြို့နယ် အာယုတောင်ကျေးရွာအုပ်စု ကလိပ်တုတ်ကျေးရွာဘက်မှာ စစ်ကောင်စီ တပ်နဲ့ KNLA အထူးကွန်မန်ဒို တပ်ဖွဲ့တွေ မေ ၁၅ ရက်နေ့မွန်းလွဲ ၂ နာရီကျော်လောက်က နာရီဝက်ကြာ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာမှာ စစ်တပ်က ၃ ဦး ကျဆုံးခဲ့ပြီး ဒဏ်ရာရသူတွေလည်း ရှိတယ်လို့ ရေး PDF မြောက်ပိုင်း တာဝန်ရှိသူတဦးက ပြောပါတယ်။
ကလိတ်တုတ်ရွာမှာ EAO က ပြုလုပ်တဲ့ လူငယ်သင်တန်း သတင်းရလို့ဆိုပြီး စစ်တပ်က အင်အားသုံး စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အချိန်မှာ ကလိတ်တုတ်ရွာအပြင် ပေ့ကူးတံတားအနီးမှာ KNLA ကအဆင့်သင့်နေရာယူစောင့်ဆိုင်း တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး KNLA ဘက်က ထိခိုက်ကျဆုံး မရှိဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ အခုဖြစ်စဉ်နဲ့ ပက်သက်ပြီး စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်က ထိခိုက် သေဆုံးတာတွေကို သတင်းထုတ် ပြန်ပြောဆိုတာတွေ မရှိသေးပါဘူး။
ရေးမြောက်ပိုင်း ကရင်ရွာတွေ ‌အတော်များများမှာ စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းထိုးပြီး တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့် ပြည်သူတွေ ထွက်ပြေးရှောင်တိမ်းနေကြရတယ်လို့ ဒေသခံတဦးက ပြောပါတယ်။
မွန်ပြည်နယ် ရေး မော်လမြိုင်သွားကားလမ်းဘေး မော့ကနင်ကျေးရွာအနီး အခြေစိုက်တဲ့ စစ်ကောင်စီ ၁၀၆ တပ်ရင်းနဲ့ ၅၈၈ တပ်ရင်းတွေက တိုက်ပွဲမဖြစ်ဘဲ ညဘက်တွေမှာ ခြောက်လှန့်ပစ်ခတ်နေတာကြောင့် ဒေသခံတွေ စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။
မေ ၁၄ ရက် ည ၈ ခွဲဝန်းကျင်မှာ သေနတ်သံ အချက်ပေါင်းများစွာ ပစ်ခတ်နေတာကြောင့် ညဘက်ဆို လုံခြုံမှုမရှိသလို ခံစားရတယ်လို့ အနီးနားနေ ဒေသခံတဦးက ပြောပါတယ်။
ရေး PDF မြောက်ပိုင်း တာဝန်ရှိသူတဦးက “ညဘက် တပ်ဘက်က အချက် ၃၀ ဆိုတာ လက်နက်ကြီး အသံပါ၊ လက်နက်ငယ် အသံက ရာချီ ပါပစ်တာတော့ ဟုတ်တယ်။ PDF တွေနဲ့ ပစ်ခတ်တာတော့ မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ညဘက်တွေဆို တပ်က လုံခြုံရေးကင်းပုန်းဝပ်လေ့ရှိပြီး ခြောက်လှန့်တာဖြစ်တယ်” လို့ ပြောပါတယ်။
စစ်တပ်ဟာ PDF တွေရဲ့ ချောင်းမြောင်း ပစ်ခတ်တာခံရလေ့ရှိတော့ အခုလို အသင့်အနေအထား နေရာယူပြီး တပ်စခန်းအနီး ဝန်းကျင်တွေကို မကြာခဏ ခြောက်လှန့်ပစ်ခတ်တာ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ စစ်ရေးလေ့လာသူတွေက ဆိုပါတယ်။
ရေး – မော်လမြိုင်ကားလမ်းကနေ ရေးဘက်ကို အင်အားဖြည့်လာတဲ့ စစ်ယာဉ်တန်းတွေဟာ ရေးမြို့နယ်အဝင် ကားလမ်းတွေမှာ မကြာခဏ တိုက်ခိုက်ခံရလေ့ ရှိသလို ကားလမ်းဘေးမှာ အခြေစိုက်တဲ့ စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေလည်း တိုက်ခိုက်ခံရတာတွေ ရှိတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။
Irrawaddy - Lun, 16/05/2022 - 12:14pm
The post Resistance Commander Killed in Fighting with Myanmar Junta appeared first on The Irrawaddy.
Irrawaddy - Lun, 16/05/2022 - 12:08pm
The post Regime Forces Torture and Kill 29 People in Upper Myanmar appeared first on The Irrawaddy.
ထိုင်းသို့ တရားမဝင် ဝင်လာသည့် မြန်မာလုပ်သား ၂ ရက်အတွင်း ၃၀၀ ခန့် ဖမ်းဆီးခံရ
DVB - Lun, 16/05/2022 - 12:06pm
ထိုင်းနိုင်ငံထဲကို တရားမဝင် ဝင်ရောက်လာတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ နေ့စဉ်လို ဖမ်းဆီးခံနေရတာမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ ရက်တည်းမှာတင် အယောက် ၃၀၀ နီးပါး ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ ထိုင်းသတင်းတွေအရ သိရပါတယ်။
မေလ ၁၅ ရက်က ထိုင်းမြောက်ပိုင်း ချင်းမိုင်ခရိုင်၊ အုမ်းကွယ်မြို့နယ်ထဲမှာ တရားမဝင် မြန်မာ ၄၅ ဦးကို တောထဲမှာပုန်းအောင်းနေစဉ် ဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့ ချင်းမိုင်နယူးစ်သတင်းမှာ ဖော်ပြပါတယ်။
ဒေသထဲမှာ တရားမဝင်အလုပ်သမားတွေ ဝင်ရောက်လာဖို့ရှိကြောင်း ကြိုတင်သတင်းရထားတဲ့ အတွက် တာဝန်ရှိသူတွေက ကင်းလှည့်စစ်ဆေးစဉ် ယန်းပျိန်းအုပ်စု နားခလိုက်ကျေးရွာအနီး တောစပ်မှာရပ်ထားတဲ့ မသင်္ကာတဲ့ ဟိုင်းလပ်ကား ၃ စီးကို စစ်ဆေးတွေ့ခဲ့သလို အနီးနားတောထဲမှာလည်း တရားမဝင် မြန်မာနိုင်ငံသား အမျိုးသား ၂၄ ယောက် ၊ အမျိုးသမီး ၂၁ ယောက် စုစုပေါင်း ၄၅ ယောက် တို့ကို တွေ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
စစ်ဆေးချက်အရ သူတို့ဟာ မြန်မာပြည် လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်ကဖြစ်ပြီး မြဝတီ- ပဲကောင်လမ်းဘက် ကနေ ဝင်လာကြောင်း ထိုင်းမှာ အလုပ်လာလုပ်ဖို့ ပွဲစားကို ၁ ဦးလျှင် ဘတ် ၂၀၀၀၀ မှ ၂၃၀၀၀ ထိ ပေးရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ယာဉ်မောင်း ၃ ဦးမှာ ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ပြီး တယောက်က ဖာ့ကာ့ချေရွာသူကြီးရဲ့ လက်ထောက်ဖြစ်နေကြောင်း၊ သူတို့ဟာ တရားမဝင်အလုပ်သမားတွေ တင်လာကြောင်း ဝန်ခံပြီး လမ်းခုလတ်မှာ ခေါင်းဆောင်ဆိုသူက အရှေ့မှာ စစ်ဆေးရေးဂိတ်ရှိတယ်လို့ အကြောင်းကြားလာလို့ ရှေ့ဆက်မသွားဘဲ တောထဲမှာ ပုန်းအောင်းနေစဉ် ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတာလို့ ဆိုပါတယ်။
မေ ၁၅ တနေ့တည်းမှာပဲ တာ့ခ်ခရိုင် မဲဆောက်မြို့နယ်နဲ့ ဖုပ်ဖရမြို့နယ်ထဲမှာ တရားမဝင်မြန်မာ ၁၀၇ ဦး အဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။
၃၇ ဦးကို မဲဆောက်မြို့နယ် မယ်ပရပ်ကွက် ခွန်းဝမ်ဆိုင်အနောက်က အိမ်တအိမ်မှာ သတင်းအရ သွားရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်း၊ အဆိုပါ အိမ်ထဲမှာပဲ နိုင်လင်းဆိုသူ အမျိုးသား ၁ ယောက်ထံက ပစ္စတို ၂ လက်နဲ့ ကျည်ဆန် ၈ တောင့် ၊ အဲဒီအိမ်မှာ ရပ်ထားတဲ့ တရားမဝင်သူတွေ တင်ဆောင်လာတဲ့ ကား ၃ စီး နဲ့ လိုင်စင်မဲ့ ဆိုင်ကယ် ၃ စီးကို ဖမ်းမိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သူတို့ ၃၇ ယောက်ဟာ ဘန်ကောက်နဲ့အ တခြားဒေသမှာ အလုပ်သွားလုပ်ဖို့ အဲဒီအိမ်မှာ ခေတ္တလာနားစဉ် ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတာပါ။
အလားတူ ဖုပ်ဖရမြို့နယ် ဆီရီရတ်ဆဒွန်းအုပ်စု မယ်လမော့ရွာအနီးမှာ တရားမဝင် မြန်မာ ၇၀ အယောက် အဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်လို့ AEC အာဆီယံထိုင်းသတင်းမှာ ဖော်ပြပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၁၄ ရက် ကတော့ ထိုင်းအနောက်ပိုင်း ပရကျုပ်ခီရီခန်ခရိုင် မိုင်းမြို့နယ် ကော်လတ်အုပ်စု ထုန့်ခလိတ်ကျေးရွာအနီးတောထဲမှာ ခရီးပန်းလို့ အိပ်စက်အနားယူနေတဲ့ မြန်မာ ၁၁၂ ဦး တို့ကို ဖမ်းဆီးရမိကြောင်း၊ သူတို့ဟာလည်း ဘန်ကောက်မှာအလုပ်သွားလုပ်ဖို့ ပွဲစားကို ၁ ဦးလျှင် ဘတ် ၂၅၀၀၀ မှ ၃၀၀၀၀ ထိ ပေးပြီး ဝင်ရောက်လာတာလို့ ထိုင်းစစ်တပ်သတင်းမှာ ဖော်ပြပါတယ်။
အဲဒီတနေ့တည်းမှာ ချင်းရိုင်းခရိုင် မယ်ဆိုင်မြို့နယ် ဝိန်းဖန်းခမ်းအုပ်စု ဖာမီကျေးရွာနားမှာ မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား ၂ ဦး မောင်းနှင်လာတဲ့ ကား ၂ စီးပေါ်ကနေ အမျိုးသား ၁၀ ဦး၊ အမျိုးသမီး ၁၃ ဦး နဲ့ ကလေးငယ် ၄ ဦး စုစုပေါင်း ၂၇ ဦးကို ဖမ်းမိကြောင်း ၊ သူတို့ကတော့ ရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်း ကျိုင်းတုံကနေလာတာလို့ မယ်ဆိုင်ဒေသတွင်းသတင်းမှာ ဖော်ပြသွားပါတယ်။
စစ်ခေါင်းဆောင်၏ အင်းယားလမ်းနေအိမ် ရောင်းချမှု ၁၀ ရက်အတွင်း ကန်ဒေါ်လာ ၄ သန်းရရှိ
DVB - Lun, 16/05/2022 - 11:56am
အာဏာသိမ်း စစ်ခေါင်းဆောင် မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ ရန်ကုန်မြို့ အင်းယားလမ်း နေအိမ်ကို NUG အစိုးရက ရောင်းချနေရာမှာ ပထမ ၁၀ ရက်အတွင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄ သန်းဖိုး ရှယ်ယာရောင်းထားရပြီလို့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ (NUG) က ကြေညာပါတယ်။
စစ်ခေါင်းဆောင် မင်းအောင်လှိုင် မတရားသဖြင့် ရယူထားတဲ့ ရန်ကုန်မြို့၊ အင်းယားလမ်းက နိုင်ငံတော်ပိုင်မြေဟာ ၁ ဒသမ ၈၆ ဧက ကျယ်ဝန်းပြီး ကာလပေါက်ဈေး အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း ၃၀ ကျော်ရှိပေမဲ့ ကာလတန်ကြေးရဲ့ ၃ ပုံ ၁ ပုံ၊ အမေရိ ကန် ဒေါ်လာ ၁၀ သန်း တန်ဖိုးဖြတ်ပြီး NUG က ရှယ်ယာတစုကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀၀ သတ်မှတ်ပြီး အစုရှယ်ယာ ၁ သိန်းတိတိ ရောင်းချနေတာပါ။
DVB - Lun, 16/05/2022 - 10:47am
“ဖေကြီးရေ . . သုံးထပ်သားကို အရက်နဲ့ နယ်နှပ်ထားပြီး ပဲငံပြာရည်နဲ့ အိနေအောင် ဆီပြန်ချက်ထားတယ်။ မန်ကျည်းရွက်ချဉ်ရည်ရယ်၊ ငရုတ်သီးစိမ်း ငါးပိထောင်းစပ်စပ်ရယ်၊ ပဲကြီးနှပ်ရယ် . . . အားရပါးရသာ ဆွဲဟေ့”
” အဘစောမူးသာလက်ရာပဲဗျာ . . . အားလဲ နာမနေတော့ပါဘူး . . . ဆွဲပြီဗျို့”
“ဟားဟား ဟားဟား ဟားဟား . . . . . .”
“ဖေကြီးရေ . . ဒါ ငါ့သူငယ်ချင်း ‘ရစ်ချတ်’ ပေါ့ကွ” “ဟာ . . . အဘကလည်း ဖေကြီးနဲ့ အဘ ‘ရစ်ချတ်’ နဲ့ သိတာ ကြာပြီလေ ခင်ဗျ။” “ဟုတ်တယ်လေ မူးသာရဲ့၊ ဖေကြီးနဲ့ ငါနဲ့သိတာ ကြာလှပြီလေဟာ။ ခုမှ ဘာလာကြောင်နေပြန်တာလဲ မသာရဲ့”
“ဟားဟား ဟားဟား ဟားဟား” အဘစောမူးသာက ထရယ်ပါလေ၏။ ပြီးတော့ သည်လို ပြောပြန်ပါတယ် ခင်ဗျ။ “ဖေကြီးရေ . . . ‘ရစ်ချတ်’ က အခု နာမည်အသစ်ရနေပြီကွ၊ ‘ကလစ်ရစ်ချတ်’ လို့ အမည်ပြောင်းထားလိုက်ပြီ ဟ”
“သူငယ်ချင်း မူးသာကတော့ လုပ်ပြီ။”
‘ကလစ်ရစ်ချတ်’ ဆိုတော့ ကမ္ဘာကျော် အဆိုတော်ကြီး ‘ကလစ်ဖ်ရစ်ချတ်’ ကို သွားသတိရမိတယ်။ အဘရစ်ချတ်ဟာ သီချင်းဆိုလည်း ကောင်းတယ်ဆိုတော့ အဲသည်အဆိုကျော်ကြီး ‘Cliff Richard’ ကိုလည်း ခိုက်ပုံရတယ်လို့ ထင်မိတာပေါ့။
အဲသည်အဆိုကျော်ကြီး ‘Cliff Richard’ ဆိုတာ ကမ္ဘာကျော်ကြီးပေါ့။ မြန်မာပြည်က ကော်ပီတေးပေါင်းများစွာမှာ အဲသည် ကလစ်ဖ်ရစ်ချတ် ဆိုတဲ့ ဘိုးတော်ကြီးရဲ့ သီချင်းသံစဉ်ပေါင်း များစွာမှ များစွာ ပါဝင်တာပေါ့ ခင်ဗျာ။ ပလေးဘွိုင်သန်းနိုင်က အစ ထူးအိမ်သင်တို့အထိ ရှိခဲ့တာပါ။ ကျော်ဟိန်းကြီးကော်ပီဆိုခဲ့တဲ့ သီချင်းတွေ များစွာထဲမှာလည်း ကလစ်ဖ်ရစ်ချတ်သီချင်းတွေ တလှေကြီးပါတယ် ခင်ဗျ။ ဥပမာပြောရရင် ‘Move It’ ဆိုတဲ့ သီချင်းကို ‘ကမ္ဘာသစ်’ ဆိုပြီး ကျော်ဟိန်းကြီး ကော်ပီဆိုခဲ့တာပေါ့။
“မှောင်သောညတွေ ပြီးရင် တွေ့မယ် ငြိမ်းချမ်းသော ကမ္ဘာသစ်ကြီး . . . တေးသံကြားရင် ဒို့လူသားတွေ သဘောထားတွေပြောင်း . . . . ရန်ပွဲတွေရပ် ငြိမ်းချမ်းရေးကို မင်း မြင်လား . . . . ကောင်းကင်ထက်မှာ ချိုးဖြူငှက်များ ဝဲပျံသွား တွေ့လား . . . . . . . . . . . “
‘ကလစ်ဖ်ရစ်ချတ်’ ကို ဖေကြီးလည်း ခိုက်တယ် အဘစောမူးသာရဲ့။
“ဟားဟား ဟားဟား ဟားဟား “
“အေးပါ . . . ချောက်တွန်းပါ မူးသာရေ၊ ဟိုက ‘Cliff Richard ‘ ကွ။ ဒီကောင်ကြီးကတော့ ‘Click Richard’ ပါတဲ့ကွ၊ အဟ . . . အဟ . . . အဟ . . . “
‘Click Richard’ ဆိုတော့ . . . . . .၊ အေးကွ . . . ရစ်ချတ်က နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပဲ တရက်မပျက် ‘Click’ တဲ့သူကွ။ NUG အစိုးရအတွက်၊ PDF တွေအတွက် အလှူငွေ များများရအောင် ငါလည်းတတ်နိုင်တဲ့ဘက်က ကူညီနေတာလေကွာ။ ငါ တနေ့ကို အနည်းဆုံး နာရီဝက်လောက် အချိန်ပေးပြီး ‘ကလစ်’ တယ်ကွ ဖေကြီးရ။
“ဟုတ်ကဲ့ပါ အဘရစ်ချတ် “
“အွန်လိုင်းမှာ အဲသလို ‘ကလစ်’ လုပ်တဲ့သူတွေ များလေလေ အလှူငွေတွေ များများ ရောက်လေပဲပေါ့ကွ။ ဒါ့ကြောင့် ဒီကောင့်ကို ချစ်စနိုးနဲ့ ‘Click Richard ‘ လို့ စနေတာ ပါဗျား . . . ဟားဟား ဟားဟား ဟားဟား”
ပြီးမှ အဘစောမူးသာက ရှင်းပြပါတယ်။ ခင်ဗျ။ နိုင်ငံ့ပလ္လင်ပေါ်ကို (-) တက်ထိုင်နေပြီဆိုရင် အဲသည် (-) ကို ‘ မောင်းချဖို့ ‘ တာဝန်ဟာ နိုင်ငံသားတိုင်းမှာ ရှိပါတယ်တဲ့။
“အေး . . . အဲသည် (-) ကို သွားမောင်းတဲ့နေရာမှာ အားလုံးပဲ တက်ညီလက်ညီ ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ကြဖို့လိုတယ်။ ကိုယ်က အနားမကပ်ဝံ့ရင် ကပ်ရဲတဲ့သူတွေအတွက် တုတ်တို့၊ ခဲတို့၊ လေးခွတို့၊ လောက်စာလုံးတို့ ဝိုင်းရှာပေးကြရမယ်။ ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ဟာတွေကို ဝိုင်းပြီးပံ့ပိုးကြရမဟ”
အခုအခါမှာ ဖက်ဆစ်တပ်က သေနာငပုဟာ ရူးနေပြီဖြစ်ကြောင်း၊ သွက်သွက်ခါနေပြီဖြစ်ကြောင်း။ NUG ကို ထောက်ပံ့နေတယ်ဆိုပြီး PDF တွေကို ငွေလှူနေတယ်ဆိုပြီး ပြည်သူတွေရဲ့ ဘဏ်အကောင့်တွေ၊ KPay အကောင့်တွေ၊ WaveMoney တွေကို တလကြမ်းပဲ လိုက်ရမ်းလိုက်ဖမ်းနေတဲ့အတွက် အဆင်မပြေကြဘူးတဲ့။ ဒါကြောင့်မို့ စိတ်ချလုံခြုံတဲ့ ဒါရိုက်ရောက်တဲ့ အဲသည် ‘Click ‘ နည်းနဲ့ နိုင်ငံသားတိုင်း လွတ်လပ် လုံခြုံ ဘေးကင်းစွာ ပါဝင်ကြဖို့ဟာ ‘သမိုင်းပေးတာဝန်’ ပါလို့ ပြောပါတယ် ခင်ဗျ။
“ကဲ ကဲ . . . ကလစ်ရစ်ချတ် ဖုန်းထုတ်၊ ကလစ်ထွန်းခင် ဖုန်းထုတ်၊ ကလစ်ဖေကြီး ဖုန်းထုတ်၊ ဒို့တွေ ‘ကလစ်’ ကြမယ်”
“အမိန့်တော်မြတ်အတိုင်းပါ ကလစ်စောမူးသာ ကိုယ်တော်ကြီးဘုရား . . . . . .”
“ဟားဟား ဟားဟား ဟားဟား”
ရဟတ်ယာဉ်အမှု တရားလို ခွင့်ယူထားသဖြင့် မစစ်ဆေး၊ လာမည့်အပတ် ထပ်ချိန်း
DVB - Lun, 16/05/2022 - 10:43am
စစ်ကောင်စီက နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦး၀င်းမြင့်၊ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဒေါက်တာ၀င်းမြတ်အေး တို့အပေါ် စွဲဆိုထားတဲ့ ရဟတ်ယာဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အဂတိအမှုတွေအတွက် မေလ ၁၆ ရက်နေ့ရုံးချိန်းမှာ တရားလို မလာတဲ့အတွက် မစစ်ဆေးဖြစ်ဘူးလို့ တရားရုံးနဲ့ နီးစပ်သူတဦးက ပြောပါတယ်။
ဒီနေ့ရုံးချိန်းမှာ တရားလိုဦးအောင်ခန့် နေမကောင်းလို့ ခွင့်တင်ထားတဲ့အတွက် နောက်အပတ်ကို ပြန်ချိန်းလိုက်ပြီး သူ့ကိုပဲ ပြန်လှန်စစ်မေးမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်းမှာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေ ဆောင်ရွက်တာမှာ အသုံးပြုဖို့ ရဟတ်ယာဉ်တစီး ၀ယ်ယူအသုံးပြုတာ၊ ငှားရမ်းတာ၊ သက်တမ်းတိုးတာ၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းတာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စစ်ကောင်စီက နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦး၀င်းမြင့်၊ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဒေါက်တာ၀င်းမြတ်အေးတို့ကို အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၅ နဲ့ တရားစွဲဆိုထားတာပါ။
ရုံးချိန်းကို လာရောက်တဲ့ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦး၀င်းမြင့်နဲ့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်တယ်လို့လည်း အဆိုပါတရားရုံးနဲ့နီးစပ်သူက ပြောပါတယ်။
Irrawaddy - Lun, 16/05/2022 - 10:11am
The post KIO Warns Civil Servants in Northern Myanmar Not to Work for Junta appeared first on The Irrawaddy.
Irrawaddy - Lun, 16/05/2022 - 9:54am
The post ASEAN’s Five-Point Consensus ‘Not Appropriate’ for Myanmar: Ex-US Ambassador appeared first on The Irrawaddy.
Democratic Voice of Burma - Lun, 16/05/2022 - 4:45am
Due to extremely low audience numbers, movie theater owners are shuttering locations just weeks after the military forcedanationwide restart of Burma’s film industry.
Film producers, many of whom have been blocked from leaving the country, say they are finding it difficult to screen movies despite the military recently forcing cinemas across Burma to reopen followingatwo-year hiatus.
Nearly 70 cinemas across the country were forced to reopen on April 17, screening movies featuring celebrities recently released from prison sentences — yet the general public has comprehensively boycotted theaters on political grounds.
Only around 10 cinemas, large military-owned, are still presenting films after last month’s reopening. Most have dropped Burmese titles in favor of dated international offerings.
“Thuwanna Nadi company used to import international movies before the pandemic. But [foreign movie licenses] are no longer available. I have no idea how they can show these movies. How can they show new international movies while the film industry in Burma is sinking? Most people know that any of them may be downloaded online or watched via streaming services,”asource from the film industry told DVB.
In the Kachin capital Myitkyina, the Ayeyar cinema this week screened the Thai movie “Pee Nak 3” — released in April — with the foreign offering managing to attractamodest number of visitors, according to locals.
Theaters forced to open by the junta last month had, amongst other titles, screened the long-shelved Burmese movie “Way Ma Nay Chin Bu”, starring actor and director Lu Min who had been imprisoned by the junta and released in an amnesty The film is believed to have grossedamere K32 lakh (US$1,700) nationwide before being shelved; the worst opening month foramovie in Burma’s recent history.
Producers claim that, on average, it costs studios between K800-1,000 lakh (US$40,000-54,000) to shootamovie in country.
“It costs around K80 lakh (US$4,300)aweek to showamovie at [Yangon’s famous] Thamada Cinema. Cinemas pay at least K30 lakh (US$1,600) in rent to the government. The government froze taxes for cinema owners during the pandemic. Now, [cinema owners] are also losing money just by opening their venues. They have to pay the operating costs even if they do not have to pay taxes to the government. Only K80 lakh (US$4,000) was earned fromamovie starring Pyay Ti Oo. And now, no one is watching the movie with [Burmese heartthrob] Paing Takhon. Everyone involved in the industry is losing money!”asource exclaimed.
The state-owned Thamada Cinema in Yangon is one of the largest cinemas in the country, with tickets costing from K3,000 (US$1.60) to K20,000 (US$10.70). Those working closely with the theater say that, before the coup and the military’s relentless crackdown on the arts,amovie would typically gross between K1,500 to 3,000 lakh (US$81,000 to 108,000) overatwo week opening.
Of 70 cinemas nationwide, only Thamada, Win Light in Mandalay, Ayeyar in Myitkyina, andafew other select locations remain open following the aborted launcha.
Myanmar News Net - Lun, 16/05/2022 - 3:18am
New Delhi [India], May 16 (ANI): Prime Minister Narendra Modi will lay the foundation stone for the construction ofaunique centre for Buddhist Culture and Heritage within the Lumbini Monastic Zone during his official visit to Nepal's Lumbini on Monday on the occasion of Vaishakha Buddha Purnima, informed the Ministry of Culture. At Lumbini, the Prime Minister will visit the sacred Mayadevi temple to offer prayers. Prime
Myanmar News Net - Dom, 15/05/2022 - 6:05pm
YANGON, May 15 (Xinhua) -- Myanmar reported four new confirmed cases of COVID-19 in the past 24 hours, bringing the tally in the country to 613,140, according to the Ministry of Health on Sunday.
The ministry said it has tested 6,603 people in the past 24 hours, and the daily positivity rate is 0.06 percent.
According to the ministry's figures, the death toll from COVID-19 in the country stood at 19,434.<
ယင်းမာပင်တွင် စစ်တပ်က ပြည်သူ ၁ ဦးအား သတ်ဖြတ်ပြီး နေအိမ်များကို မီးရှို့ဖျက်ဆီး
DVB - Dom, 15/05/2022 - 2:37pm
စစ်ကိုင်းတိုင်း ယင်းမာပင်ခရိုင် ယင်းမာပင်မြို့နယ်အတွင်း မေ ၁၅ ရက် မနက် ၇ နာရီလောက်က စစ်ကောင်စီတပ်က အပြစ်မဲ့ပြည်သူ ၁ ဦးကို သတ်ဖြတ်ခဲ့ပြီး ကျေးရွာ ၂ ရွာက ပြည်သူတွေရဲ့ နေအိမ်တွေကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။
မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရတာကတော့ နှောရိုးကျေးရွာနဲ့ ရိုးမတိမ် ရွာသာယာကျေးရွာတို့က နေအိမ်တွေဖြစ်ပြီး နှောရိုးကျေးရွာက အိမ်ခြေ ၅ လုံးနဲ့ ရိုးမတိမ် ရွာသာယာကျေးရွာက အိမ်ခြေ ၂၄ လုံးအပြင် စျေးဆိုင်တန်း ၁ ခု တို့ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါ့အပြင် နှောရိုးကျေးရွာနေ စစ်ရှောင်ပြည်သူတဦးကိုလည်း စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့က သတ်ဖြတ်ထားခဲ့ကြတယ်လို့ ဒေသခံတဦးက ပြောပါတယ်။
စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ရဲ့ သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသူဟာ ကိုအောင်ဇော်သိန်း ဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်းငါးဖမ်းသင်္ဘောလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူတယောက်ဖြစ်ကာ ရွာကိုပြန်ရောက်တာ မကြာသေးဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါ့အပြင် စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ ရှို့ထားခဲ့တဲ့ မီးကို ပြည်သူတွေက သွားရောက်ငြှိမ်းသတ်ရာမှာလည်း လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ ထပ်မံပစ်ခတ်တာကြောင့် မီးငြှိမ်းသတ်နေတဲ့ပြည်သူတွေ အသက်လု ထွက်ပြေးခဲ့ကြရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အခုလိုမီးရှို့သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့တပ်ဟာ မေ ၁၅ ရက် မနက် ၄ နာရီလောက်က ယင်းမာပင်မြို့ရဲ့ အရှေ့ဘက်တနေရာမှာ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ တပ်ဖြစ်တယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။
စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဟာ ယင်းမာပင်မြို့နယ်အတွင်းက ပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကို နေ့စဥ်ရက်ဆက် မီးရှို့မှုနေပြီး မေ ၁၄ ရက်နေ့ကလည်း တရော်ကျင်းကျေးရွာက နေအိမ် ၂၅ လုံးကို မီးရှို့ခဲ့ပါသေးတယ်။
DVB - Dom, 15/05/2022 - 1:14pm
ဒီနေ့ ညနေ ၃ နာရီမှာလည်း ရွှေဇလုပ်ရပ်ကွက်နေ ဦးကျော်တင်ဆိုသူ နေအိမ်မှာ သေနတ်နဲ့ ဝင်ရောက်ပစ်သတ်တာ ခံခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့တွင် စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး ချီတက်ဆန္ဒပြ
DVB - Dom, 15/05/2022 - 1:05pm
“မတရားမှုလွင်ပြင်မှာ ခှိုလှုံစရာဘာအရိပ်မှမရှိ” စာသားကိုင်ဆွဲကာ ရန်ကုန်မြို့တနေရာမှာ စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး ဒီနေ့ ချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီလှုပ်ရှားမှုကို စမ်းချောင်းပင်မသပိတ်စစ်ကြောင်း (SC Strike)၊ Revolution Force(RF)၊ Labour Alliance (CTUM)၊ ရေဘဝဲ(ပြည်သူ့အကျိုးပြုလူငယ်အဖွဲ့အစည်း)၊ အလုံလူငယ်တပ်ဦး (AYF)၊ LGBT Community Yangon၊ Youth Association of Thingangyun (YAT) တို့က စနစ်တကျ ညီညွတ်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာလို့ သိရပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့တွင်း စစ်ကောင်စီတပ်တွေ လုံခြုံရေးတင်းကြပ်နေတဲ့ကြားမှ ဆန္ဒပြခဲ့ကြဖြစ်ပြီး ပြည်သူလူထုအား စိတ်ဓာတ်တက်ကြွစေဖို့နဲ့ မတရားမှုတွေကို တိုက်ထုတ်တဲ့အခါ ကြောက်စိတ်တွေကို ဘေးဖယ်ထားပြီး တော်လှန်ရေးမှာ ရရာနေရာကနေ သွေးမအေးဘဲ ပါဝင်တော်လှန်ပေးကြဖို့ သပိတ်အင်အားစုတွေက တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။